I-Grunge Style yeTayid Dress Shirt - i-Buddhatrends
I-Grunge Style ye-Stylish Dress Shirt
$41.30 $59.00 Ugcina i30% ($17.70)
Umnyama noMhlophe / S Umnyama noMhlophe / M Umnyama noMhlophe / L I-Black & White / XL Umnyama omnyama / i-XXL Umnyama omnyama / u-XXXL Umnyama noMhlophe / 4XL Umnyama noMhlophe / 5XL
Iingubo ezingaphezulu kweengubo zona zilungileyo xa kuzibandakanya ukuxuba nokudibanisa. Ifumaneka kumklamo omnyama kunye omhlophe, lo mzobo ococekileyo we-shirt ungalinganiswa kunye neebhothi zakho zamabhokhwe owathandayo jonga.
Amaphetshana afanelekileyo kwidlobo nayo inkulu kwiizitshixo zakho, isikhwama esincinci okanye ifowuni nje ukuba awufuni ukuzisa isikhwama okanye isikhwama. Thatha ubungakanani obukhulu xa ufuna i-loose loosesized fit!
Itholakala kwi-small to size plus, ukusuka kwi-S ukuya kwi-5XL ukuze ifanelane nabafazi bazo zonke iifom.
Ubude bengubo: Ophakathi kweNkomo
Uhlobo lohlobo: Plaid
Neckline: Ikholeji yokujika
I-2 Imibala egqoke i-Hippie Long Dress
I-2 Imibala egqoke i-Hippie Long Dress $40.80 $68.00
I-3 / 4 Ubude beengqumbo ze-Florm Harem
I-3 / 4 Ubude beengqumbo ze-Florm Harem $62.00
I-3 / 4 Ubude Ubume obuphefumlelweyo Iingubo zeHarm
I-3 / 4 Ubude Ubume obuphefumlelweyo Iingubo zeHarm $62.00
Umgca we-Royal Blue Long Sleeveless Maxi Dress
Umgca we-Royal Blue Long Sleeveless Maxi Dress $53.40 $89.00
I-Abstract Prints I-White & Blue Bluesized Dress
I-Abstract Prints I-White & Blue Bluesized Dress $53.40 $89.00
I-Asia Art Kaftan Maxi Dress
I-Asia Art Kaftan Maxi Dress $57.60 $72.00
Ingubo yamaMidiya engenamikhono engapheliyo
Ingubo yamaMidiya engenamikhono engapheliyo $40.80 $68.00